केपी ओली झुटका पुलिन्दा, फोहोरका डंगुर हुन् : माधव नेपाल -
केपी ओली झुटका पुलिन्दा, फोहोरका डंगुर हुन् : माधव नेपाल
२९ पुस, काठमाडौं । नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका एकजना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झुटको पुलिन्दाको संज्ञा दिएका छन्। दाहाल-नेपाल समूहले काठमाडौंमा गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीजी झुटका पुलिन्दा हुन्। उनले के बोलिरहेका छन् थाहा पाइँदैन, केपी ओलीसँग कम्युनिष्ट सिद्धान्तप्रति कुनै प्रतिवद्धता छैनु, उनले भने, ' उहाँ फोहोरको डंगुर हो, डुङडुङी गन्हाउँदा पनि शरीरमा बोक्नु परेको छ भनेर वामदेव कमरेडले भन्नु भएको थियो। अहिले पनि वामदेव कमरेड उनलाई सुधार्न बालुवा पेलिरहनु भएको छ। तर केपी ओली सुध्रिने मान्छे होइनन्। उहाँ भाँचिन तयार हुनुहुन्छ तर झुक्न जान्नु हुन्न।'
नेपालले ओली गुट गलत बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । उनले ओली गुटले फैलाएका भ्रमलाई एक–एक गरी चिर्दै अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ओली गुट गलत बाटोमा छ । तपाईंहरू भ्रममा नपर्नु । ओली गुटले फैलाएका भ्रमलाई एक–एक गरी चिर्नुपर्छ । ओली झुटको पुलिन्दा हो । ओली समूहको पार्टी, पार्टी होइन, उनको समूह सडकको धुलोमा परिणत हुन्छ । त्यो समूहबाट असन्तुष्ट भएर यता आउने साथीहरूको संख्या धेरै छ । उहाँमा भएको आरचण, संस्कार र सोचका कारण कोही टिक्नेवाला छैन त्यहाँ । त्यो समूह, ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट होइन ।’
अदालतको फैसलामा निर्वाचनको मिति निर्भर : गृहमन्त्री थापा
पार्टी एकता हुन्छ तर ‘आरोपपत्र’ फिर्ता लिनुप¥यो : पोखरेल
झारझुरे पाराले भएन, टाउकोमै हान्नुपर्ने स्थिति आयो : प्रचण्ड
तेस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रचण्ड-माधव समूह , २८ गते काठमाडौंमा वृहत प्रदर्शन !
निर्वाचन आयोगको फैसलाले दाहाल-नेपाल समूह आक्रोशित !
ओलीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको तयारी !
ओली तिम्रो लाज छोप्न अझै कति टालो जोहो गर्नुपर्ने हो ?
हामीले सकेनौं, अव ओलीलाई जनताले तह लाउनेछन् : प्रचण्ड
सुध्रिए भने जेलमा राखौंला, अव ओलीसँग मिल्ने सम्भावना छैन् : नेपाल